September 2015 - Ibsaa Jireenyaa
September 20, 2015 Sammubani Leave a comment
Musiibaa jechuun balaa ykn qormaata nama qunnamuudha. Dhalli nama hanga ardii tanarraa jiraatutti musiiba adda addaatu irra gaha. Musiiba tana kufuu fi darbutu jira. Musiiba tana darbuu jechuun obsaan fi haala gaariin wanta namatti dhufee fudhatanii bira kutuudha. Kufuun immoo wanta takka badeef ykn darbee lafaan of qu’anii miidhaa ofii fi namoota biroo irraan gahuudha. Fakkeenyaf,yommuu qabeenyi nama jala hatamuu ykn namni du’uu akka waan qabeenyi ykn namni sun deebi’utti yaaddon,dhiphinnaa fi wantoota garagaraatin of miidhudha. Rabbiin musiiban kan nu mokkoru nu miidhuf osoo hin ta’iin wanta gaarii nu kennuufi. Wanta sanirra caalaa nu kennuuf ykn cubbuu hojjataa turre beekne akka toowbanuufi(gara Rabbiitti deebinuufi). Read more